October 28, 2015 by dalabyo 1 Comment
Waxaa jira in ka badan si ay dunida ugu badan Google Translate, Waxa kale oo dheeraad ah oo ay jirto dunida ka badan Bing Translate, muuqata 150 million ~ Russia ayaa sidoo kale sameeyo walax weyn, la yandex, engine goobidda ugu caansan ee Russia.
Yandex taageertaa luqado badan oo soo saara natiijooyinka kala duwan ka badan matoorada kale, waxa kale oo ku takhasusay luqadaha lagu hadlo gudaha Russia sida Bashkir, Kirghiz iyo Tatar. Kuwaasoo aynu hadda ay awoodaan in ay ku darto liiska luqadaha, samaynta tirada guud ee taageeray luqadaha auto-turjumay in shir sanadeedkii ah 95!
Intaa waxaa dheer ee yandex sidoo kale keenay bedelay habka aan u geeyo auto turjumaadaha, haatanna waa sidaas oo suurto gal ah si ay u dejiyaan doorashada ee engine turjumidda aad jeclaan lahayd in aad isticmaasho.
Waxaan sidoo kale dad badan (oo waxaan ula jeednaa BADAN) cayayaanka go'an in la sii daayo this, log isbedel ku siin doonaa dhadhan wanaagsan ee this:
Taageero turjumaan yandex daray
Added fursad u dooran turjubaanada ka jeeclaadeen dalban via jiita iyo hoos u dhac
U dayactir cayayaanka muhiim ah in turjumi post iyo turjumi ku daabacaan
Rajeenayo in UI xulashada luqada (magacyada afka dheer)
Fix hadal turjumaad ma raraya hore click
Mar dambe soo bandhigaan furayaasha Google dibadda
U dayactir tarjumaadaha si toos ah oo nadiif ah tab ay utils
Taageerada Bashkir, Kyrghiz iyo Tatar mahad yandex – Hadda taageeraya 95 Luqadaha!
Added taageero Sawaaxili si Bing
Mar gabbadaan dhimay dhexeeya posts in turjumo oo dhan si ay u 2 seconds
U dayactir shortcodes markii duubaya ah <p> tag
U dayactir WP_Widget wac deprecation Sawirka 4.3
Dhalato Minor u buddypress raadinta is-dhexgalka
Hagaaji Xaaladaha qaarkood marka URLs https aan doonaynin in la qori
U dayactir ku qoroto taageero saddex luqadood warqad (ceb hadda oo kaliya)
October 28, 2015 at 12:25 at the